Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Taona zina ho an’iza ?
Inty sy nday: Taona zina ho an’iza ?
Nirehaka aoka izany ny fitondrana Hvm nilaza fa « taona zina ho an’i Madagasikara ity taona 2017 hifarana ity raha ny fifandraisana amin’ny any ivelany no asian-teny ».
Dia zendana ny maro hoe « inona moa no antsoina hoe taona zina » ?
Ny valin’io aloha dia hazavaina tsotra hoe « taona nahafa-po teo amin’ny vokatra niakatra ». Raha fambolem-bary no raisina, ohatra, dia taona nahavokarana vary betsaka na tsaramaso na katsaka na mangahazo ny taona zina iray.
Ka raha ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ny any ivelany izany no ambara fa taona zina dia midika fa nitera-bokatsoa goavana ho an’i Madagasikara ilay fifandraisana nandritra ity taona 2017 ity.
Rehefa atambatambatra tokoa aloha ireo tarehim-bola nanomezan’ny fianakaviambe iraisampirenena isan-tsokajiny fankatoavana fa homena an’i Madagasikara amin’ny vola hozanahiny dia nahatratra 1.000 tapitrisa dolara. Goavana izany.
Ka ilay Madagasikara nambara fa nahazo taona zina aloha mba iza ? Izany hoe ilay 1.000 tapitrisa dolara nambara fa vokatry ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ny any ivelany, lasan’iza ?
Ny fanadihadiana koa dia namaly, ary iaraha-miaina izany, fa tsy nisy fiantraikany tany amin’ny vahoaka izany fa mihombo aza ny taham-pahantran’ny malagasy.
Mbola nohamafisin’ny Vondrona Eraopeana, ohatra, fa ny 92%-n’ny malagasy dia miaina ao ambany fetra farany ambanin’ny fahantrana. Tsy mandray 2 dolara isan’olona isanandro izy ireo. Io 2 Dolara isan’olona isanandro io no maridrefy itiliana ny hoe ambony sa ambanin’ny fetran’ny fahantrana no iainan’ilay vahoaka.
Vao mainka mitombo isanandro ny olom-pirenena tsy manan-kialofana . Mitombo toa izany koa ny isan’ny tsy an’asa. Ny harem-pirenena anefa mihena an-toerana toy ny fen’antitra fa voatrandraka sy voaondrana an-tsokosoko.
Raha nandeha ara-pahamarinana ange ny fitrandrahana sy fivarotana an’ireny harem-pirenena ireny tany ivelany, na volamena na andramena na vatosoa sy ny hafa, ka tokony ho efa tafarin-doha ny toekarena, indrindra fa nampian’io 1.000 tapitrisa dolara avy any ivelany io e !
Toa arakaraky ny ahenoana ny fitomboan’ny tarehim-bola voalaza fa azontsika malagasy no mampitombo hatrany koa ny fahantram-bahoaka sy ny fahapotehan’ny toekarem-pirenena.
Izay no mbola mahamarim-pototra ny famakafakan’ny mpandinika tia tanindrazana malagasy hoe « ireo vola nifampiraharahana na nozanahintsika tamin’ny fianakaviambe iraisampirenena, toy ny Banky Mondialy, ny Fmi, ny Vondrona Eraopeana, ny fifampiresahana amin’ny samy firenena (Frantsa, Alemana, Etazonia, Japana…) dia nanaka-danitra hatrany ny tarehim-bola fa ny vokatsoa nentiny ho an’ny firenena, ho an’i Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy, dia tsy nisy fa vao mainka fihomboan’ny fahantrana. Ary hatramin’izay io fa tsy hoe vao tato anatin’ny efa-taona na ity 2017 ity ihany.
Ka raha mirehaka ny fitondrana Hvm hoe « taona zina ho an’i Madagasikara ny 2017 » dia vantanina ny resaka fa « ho an-dry zareo mpitondra sy ny mpiara-mitavana aminy ary ireo vahiny mitsikombakomba aminy izany ».